Inter Milan Oo La Wareegtay Hogaanka Horyaalka Serie A Iyo Roma Oo Booska Kala Baxday Juventus
HomeFalanqeynta KulamadaInter Milan oo la wareegtay Hogaanka Horyaalka Serie A iyo Roma oo booska kala baxday Juventus
February 15, 2021 Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Italy, Wararka Ciyaaraha 0
Kooxda Inter Milan ayaa guul muhiim ah oo ay ka gaartay Lazio waxay kula wareegtay hogaanka Horyaalka iyadoo ka faaideysatay guuldaradii soo gaartay Ac Milan.
Inter Milan ayaana Lazio ku garaacay 3-1 waxana goolasha labo kamid ah ka caawiyay Xidiga Romelu Lukaku goolka hore ayaana ahaa Rigoore Daqiiqadii 20-aad iyo 45+1 aad ee ciyaarta waxana goolka sadexaad u dhaliyay Lautaro Martinez Goolka kaliya oo Lazio la timid waxaa ka caawiyay Gonzalo Escalante.
Guusha Inter Milan ayaana ka dhigan in qabato Hogaanka Horyaalka iyagoo leh 50 dhibcood waxana ku xigto Ac Milan oo leh 49 dhibcood.
Inter Milan ayaa kulankeeda xiga la ciyaaridoonta Kooxda Ac Milan kaasi oo mar kale cadeyndoona kooxda ku guuleysan karta Horyaalka Italy.
Dhan kale Roma ayaa guul ka gaartay Udinese taasi oo ka caawisay in ay booska kala baxdo kooxda Juventus oo kaalinta 3-aad ku jirtay waxana Roma hada ay leedahay 43 dhibcood.
Roma ayaa kulankeeda xiga la ciyaaridoonta kooxda Braga kulankaasi oo qeyb ka ah Koobka Europe League.